Mianara USS Nimitz & USS Eisenhower V2 FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 157 227
Mpanoratra: Javier Fernandez, Sylvain Parouty, fanitsiana an'i Rikoooo
Mizara amin'ny 29 / 08 / 2017: Ankehitriny 100% miara-miasa amin'ny Prepar3D v1, v2, v3 ary v4 + FSX, FSX-Endrika ho an'ny ekipa. Fampitomboana ny fametrahana automatique, version vaovao an'ny AICarriers 2 (.NET) mifanaraka amin'ireo simulateur voalaza etsy ambony.
Nohavaozina tamin'ny 6 / 17 / 2014: Fanamafisana ny fametrahana automatique, mifanaraka amin'ny Prepar3D v1 sy v2 +
Ity ny USS Nimitz & USS Eisenhower mpiady fiaramanidina mpiady avy any Etazonia. Ity dia adiresy antsoina hoe AI (Artificial Intelligence) izay tarihin'ny ordinatera.
Ity fanamafisana avo lenta ity dia hamela anao hiditra amin'ny fiaramanidina roa feno tanteraka ao amin'ny 3D anatiny / ivelany miaraka amin'ny famolavolana maromaro. Misy heliport sy catapult ihany koa ho an'ny fisintahana.
New Bible 2
Fiovana IZAO VERSION:
-New "Mandeha Replenishment" configurations ho an'ny Nimitz sy Eisenhower. Tsara ho amin'ny asa VERTREP helos.
-New Modely ny sambo oiler USNS Patuxent T-AO 201. Endri-javatra landable helipad aman'alina tselatra. Izany miasa tsy miankina toy ny AI sambo izay afaka sambo azy manokana (fanampiny fanahafana ho an'ny AIcarriers koa nomena):
-Added Etona vokatry rehetra pitifirana (mijery tsara kokoa miaraka amin'ny sambo amin'ny hetsika)
-Added Feo ho an'ny catapult fandefasana sy ny fiaramanidina fipoahana deflectors
-Fixed Ny olana izay nahatonga ny mpilalao ny fiaramanidina mba hiankohoka amin'ny rano, rehefa niditra ny tokotanin-tsambo avy any #3 hangar ascenseur.
-Fixed Alina tselatra olana ho an'ny sasany ao amin'ny fiaramanidina "seranan-tsambo fitsidihana" configurations
-Corrected Inaccuracies sasany ao amin'ny aft Radar tilikambo sy eo amin'ny nosy.
-Added Nafana catapult "shooter"
-Additional Catapult ekipa ho an'ny saka sy #3 #4.
-New Mihasimba ny catapult shuttles.
New mandeha ho azy installer, fanamboarana olana ny fametrahana ny AICarriers 2. Ary mifanaraka amin'ny dikan-Windows rehetra.
mifanaraka FSX SP2, FSX haingana, FSX Edam Edition Prepar3D v1 v2, v3, v4
Ho afaka hitazona ireo fiaramanidina roa ireo ianao, manoro hevitra anao aho hampiasa ny Tom T-45 Goshawk sy F-14 ho an'ny FSX nataon'i Dino Cattaneo. jereo http://indiafoxtecho.blogspot.com/
Tafiditra ao safidy: AIcarriers2 dia kely fandaharana izay mamela anao hametraka ny AI sambo amin'ny predefined halavirana eo anoloan'ny anao mba hahafahanao-tanety izany.
Ny USS Nimitz (CVN-68) fiaramanidina mitondra dia zavatra maro Amerikana nokleary-Powered. Izany dia iray amin'ireo goavana 11 fiaramanidina mitondra ny tafika an-dranomasina, ary amin'izao fotoana izao iray amin'ireo sambo mpiady mahery vaika indrindra eto amin'izao tontolo izao. Ny sambo atao hoe Nimitz, ho fanomezam-boninahitra ny Admiral Chester Nimitz, izay nandidy ny Fleet Pasifika nandritra ny Ady Lehibe II. Ny teny filamatra ny sambo dia "Aza Tia Tena, ny hadita". Source Wikipedia
Ny USS Dwight D. Eisenhower (CVN-69), nomenay anaram-bosotra Ike, dia zavatra maro fiaramanidina mitondra US nokleary-Powered, anisan'ny kilasy Nimitz. Izany no mitondra fiaramanidina faharoa Nimitz subclass, ary goavam-be iray amin'ireo 11 fiaramanidina mitondra ny tafika an-dranomasina. Baiko izy mba hanoloana ny USS Franklin D. Roosevelt, teo aloha mitondra fiaramanidina avy Ady Lehibe Faharoa. Tany am-boalohany, ilay sambo atao hoe ho fanomezam-boninahitra ny Eisenhower 34th Filohan'ny Etazonia, Dwight David Eisenhower. Na izany aza, ny anarany dia omena ny anarana feno Dwight D. Eisenhower May 25, 1970. Ny sambo ny teny filamatra hoe "Tiako Ike." Koa satria tonga fanompoana, Ike nanana samy hafa araka ny nandidiako 13 manamboninahitra. Source Wikipedia